Izindatshana zika-Erik Severinghaus Martech Zone |
Imibhalo nge U-Erik Severinghaus
U-Erik ubelokhu enza imikhiqizo emisha futhi eyiletha emakethe iminyaka engama-20, okuholele ekuphumeni nasezimalini ezingamakhulu ezigidi zamaRandi. Ngaphambi kwesu lokuhola e I-SpringCM, U-Erik wayengumsunguli kanye ne-CEO ye-SimpleRelevance, ipulatifomu ehlonishwa kakhulu yokufunda imishini yokwandisa ukumaketha kwedijithali. Ku-2015, i-SimpleRelevance ithengiselwe i-Rise Interactive, lapho u-Erik ahola khona ama-Business Strategy kanye nokwenza amayunithi webhizinisi elenziwe ngokwezifiso.
Ukugeleza komsebenzi: Izindlela ezihamba phambili zokuSebenzisa uMnyango Wezokumaketha Ngokuzenzakalelayo
NgoLwesithathu, Septemba 6, 2017 U-Erik Severinghaus
Esikhathini sokumaketha kokuqukethwe, imikhankaso ye-PPC nezinhlelo zokusebenza zeselula, amathuluzi asendulo anjengepeni nephepha awanandawo endaweni yanamuhla yokumaketha okunamandla. Kodwa-ke, kaninginingi, abathengisi babuyela kumathuluzi aphelelwe yisikhathi ezinqubweni zabo ezibalulekile, bashiye imikhankaso isengozini yephutha nasekuxhumaneni okungafanele. Ukuqalisa ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo kungenye yezindlela ezihlakaniphe kakhulu zokususa lokhu kungasebenzi kahle. Ngamathuluzi angcono asendaweni, abathengisi bangakhomba futhi benze imisebenzi yabo ephindaphindayo, enzima kakhulu,